ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ၾကာင္း - ဗီဒီယိုချက်တင်ပြကစားတဲ့!
ငါလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်လှပတဲ့မိန်းကလေးလိင်များအတွက်၊သင်မူကား၊ကြောက်နေကြတယ်သင်ငြင်းပယ်မည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုသင်တွေ့ဆုံသည့်အခါတစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်လမ္း၊အများပြည်သူအရပ်ဌာန၌၊ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်၊အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားသည်။ သာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ၡမ်ားအစည်းအဝေးမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ။ နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုသင်ချက်ချင်းအကြောင်းပြောပြသင့်အဘို့အရှာဖွေနေချိန်းတွေ့၊ဘဲစကားနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်အပေါ်မမျှော်လင့်တစုံတခုကိုလိုက်ပြီးအနက်အကြား။။ ပြိုကျ။ သူတို့လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ ရက်ရက်ရောရောယောက်ျားပွန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်ပေးအဘယ်မှာရှိမိန်းကလေးငယ်များလိုသင်သိမှရ-သူတို့ကလည်းလိင်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုသည္။ ရိုးရှင်း။ ဒီဘက်ပါ၊သင်မြင်နိုင်ပါသည်အရိုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ပါ။ ပေးပို့ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ချိန်းဖုန်းနံပါတ်ကိုဖန်တီး၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း။ သင်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဤ။ ပထမဦးဆုံးအဖြစ်အပျက်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်တစ်မကောင်းတဲ့အတိတ်။ ယခုအဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်တဖန်အဘို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ထို့အပြင်၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်အဘယ်သူမျှမအချိန်များအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုမှုကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်နှင့်ခရီးသွားလာများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအမှုအရာ။ စေတနာအလျောက်ဖျက်သိမ်း။ အျပင္ဘက္-အကြောင်းရင်းဖြစ်စေခြင်းငှါအလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အများအပြားမိန်းကလေးငယ်တချိန်တည်းမှာပင်။ အဘယ်ကြောင့်မဒါဟာအလွန်အဆင်ပြေအရကျွမ်းပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:ပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီး၊သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးမိန်းကလေး၊လက်ခံသတ်မှတ်ခြင်း၊ပြောင်းလဲဖုန်းနံပါတ်နှင့်သူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်း။ သင်အချိန်အများကြီးကိုကယ်တင်ကြောင်းသေချာစေရန်အစည်းအဝေးအတွက်နေရာယူနေတဲ့။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိစကားပြော၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ထို့နောက်ရွေးစရာတခုရှိတယ်အတွက်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ပြီးနောက်အတည်ပြု၊၎င်းပြိုကွဲပြပွဲများ၏မှတ်တမ်းများအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များအပေါ်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုများအတွက်နေရာ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြော်ငြာရန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ လိင်များအတွက်၊ထို့နောက်ရှိပါတယ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏အဟောင်းအတြင္းသင်တို့အဘို့;-သင့်ရဲ့ကြော်ငြာမြင်နိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အပေါင်းတို့၌မိန်းကလေးများ ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အရာအားလုံးကိုအကျိုးစီးပွားသင်အမှန်တကယ်စီစဉ်တဲ့အစည်းအဝေးနှင့်အတူသူတို့ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားကြအနက်အဓိပ္ပာယ်၊သူတို့ဆန္ဒရှိမှဖြည့်ဆည်း။.
အပြားများအတွက်ဆက်တိုက်ရာစုနှစ်၊ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိပြီဖြစ်သတ်မှတ်ကမ္ဘာ့အတည်ငြိမ်ဆုံးနှင့်အကြွယ်ဝတဲ့တိုင်းပြည်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတို့သမီးစဉ်းစားဤတိုင်းပြည်များ၏တဦးတည်းအများဆုံးအဆင်ပြေသောကမ္ဘာ၏ထောင့်လက်ထပ်ဖို့အဆွစ်လူ၊တည်ဆောက်တစ်ဦးအားကြီးသောမိသားစုနဲ့အတူသူ့သားသမီးတွေနဲ့အတူ။ သွားဖို့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဆိုလိုသည်မသာရ၏ခင်ပွန်း၏ဇာတ်ကောင်ရန်အလွန်နီးစပ်အစိတ်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုး၏၊ဒါပေမယ့်လည်းအနည်ထိုင်ဖို့အတွက်တိတ်ဆိတ်တဲ့၊ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအဘယ်မှာရှိလူတိုင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။ မရှိဒာဏ်၊အမွတ္ ၊အဘယ်သူမျှမကပင်အပူပိုင်းပရဒိသု၊အမွတ္ဒေသများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွင်တည်ရှိကြောင်းပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလန်၊အဘယ်သူမျှမ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုခဲ့ကြကြောင်းဝေသာ။ တည်ငြိမ်ရေး၊ချမ်းသာကြွယ်နှင့်မြင့်မားသောအဆင့်အများပြည်သူအမိန့်ဒီနိုင်ငံအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာအသက်ရှင်ရန်။ ဤသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ကိုယ်စားပြုသော"အများဆုံးရှေးခေတ်ဥရောပ"၊သာယာသောစိတ်ဓာတ်သည်အောင်ခြင်း၌အမြန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခေတ်သစ်အသက်တာ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်လံႈ၊စွတ်ဖါးနှင့်အခြားထူးဆန်းသောဇာတ်ကောင်များအကြောင်းသင်ပြောပြပြီးကလေးတစ်ဦးအဖြစ်။ အခမ်း၏သဘောသဘာဝ၊အသေးစားမြို့ပြအဆောက်အအုံ။ မှာပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးတွေ၊မကြာခဏစိတျစှဲနှင့်အတူ၎င်း၏တောက်ပသောအရောင်များ၊ပုံသဏ္ဌာန်၊အရောင်အဆင်း၊တူ၏ဗိသုကာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝ။ ဤအံ့သြဖွယ်တိုင်းပြည်ကြီးနေဆဲအများဆုံးလှပတဲ့ကမ္ဘာ၏ထောင့်၊ဒါပေမယ့်ကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ပြီးနှင့်အတူ၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ၊၎င်း၏ရိုးရှင်းနှင့်ကြော့။ သူအမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆွစ်ဇာလန်လူအာမခံအနက်၊တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေးအတွက်တို့၏အသွေးကိုဤလူမျိုး။ လူဆွစ်ဇာလန်ဗေးနှင့်တန်ဖိုး၏ဝိညာဉ်ရေးရာတန်ဖိုးများနှင့်အထွေထွေကျင့်တရားစံ။ ဖြစ်နိုင်သော၊ အဲဒီအရည်အသွေး၍ကြိုတင်ခန့်မှန်း၊ဒါပေမဲ့အခေါ်အစဉ်အလာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်း၏ထောင်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စကားလုံးကိုဖို့အသုံးပြုခံရနိုင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြရန်အတူတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားဆွစ်ဇာလန်။ ဒါဟာအံ့သြစရာမဟုတ်ကြောင်းသင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အမျိုးသမီးဖြစ်လာကိဳအဆင့်သို့ဦးတည်ကောင်းတစ်ဦးဘဝကို။ မြောက်မြားစွာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတွင်ပူဇော်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ဖန်တီးချင်တယ်ပျြောရှငျတဲ့မိသားစုနဲ့အတူကျွန်မိန်းမကျွန်။ အစည်းများအပေါ်အမြင်ချင်းစံအသက်တာ၏၊အကျင့်၊မေတ္တာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသမီးကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်ခင်ပွန်း၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်သင်ကူညီလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးခရီးသွားဖော်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ-အံ့သြဖွယ်သောရှိရာတိုင်းပြည်အတွက်မျှော်လင့်ချက်အမင်္ဂလာရှိသော၊တည်ငြိမ်မိသားစုအမည်မှာသေချာပါသည်ပြည့်စုံမည်။ ခြေလှမ်းယူလဗ်ာ။
အကောင်းဆုံးအရာသင်မေးလူတစ်ဦးအတွက်၊ငါမိန်းကလေးတစ်ဒီတော့ကျွန်တော်သိပြီးပေးဆောင်ဖို့ရှိသည် ။ မက်စ်နှင့်ထို့နောက်အစဉ်အမြဲ:အခကျြမြား! ပင်လျှင်၊ငါ့အဖြေဖြစ်သည်၊ကျွန်မမျှော်လင့်ချက်ကသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါ! ဒါကြောင့်၊ငါ၊သူဖြစ်ကြောင်းကိုယခုအမလေး၊အမြန်ငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံ၊ငါနှင့်သောသင်တို့၌ပြောပြရမယ်ဒါကြောင့်နီးပါးအရေးမပါဘူးဘယ်လိုသင်မေး၊အဖြစ်ကြာမြင့်စွာသင်တောင်းသောကြောင့်၊မိန်းကလေးပျော်ရွှင်ကြတယ်၊အနည်းဆုံးအချက်အလက်! အထူးသဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိုလျှင်! ပြီးပါပြီအရေးအသားမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ပါတ်အဘို့အအခုကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားကိုယ့်ကိုကိုယ်အမှတ်နေရာတာတောင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ ငါခန့်ရေးသားခဲ့သည်။ ငါစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်အနည်းငယ်အဘို့အနောက်ထပ်မေးခွန်းတွေရှိသေးလား? အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်စာသားတစ်မိန်းကလေးအထိလြမ္းဖြည့်ဆည်းဖို့သင်? ဟေး၊ငါသည်တွေ့ဆုံခဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦး(လည်း)မှတဆင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏၊ဒါပေမယ့်အတွက်သာချက်တင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသီးအသီးအခြား၊ဒါပေမယ့်ငါ ကျွန်မမယုံကြည်ဘူးကိုယ်မနှင့်အတူသင့်ရဲ့အစည်းအဝေးငါဝမ်းနည်ငါ့အကြီးမားတဲ့မေတ္တာအကြှနျုပျအဘို့အမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ရုံတစ်ခုတည်းစကားလုံး၏သတ္တုတွင်းထွက်လာကြလိမ့်မည်ဆုတောင်းများအတွက်အမြန်တုန့်ပြန်မဲ့ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့မၾနှင့်ယောက်ျားထိုသို့ညှဉ်းငါ့ကိုအကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦးသည်အ၊ကျနော်အမှန်တကယ်စာသားနှင့်အတူငါ့သင်သည်သင်၏အစည်းအဝေး။ ကောင်း၏ဖြစ်နိုင်မည်တောင်းဆိုနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ထွက်မရှိဘဲထပ်တလဲလဲကိုဆိုဖို့ကြိုးစားနေဟုတ်ကဲ့? ဟေး၊ငါအပေါ်သွားနှင့်အတူနေ့စွဲမိန်းကလေးဒါပေမယ့်သူကဒီလိုပြောပါတယ်အစည်းအဝေးအဖြစ်ထင်ဖော်ရွေချင်တယ်၊ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား? မည်သို့ငါလှည့်စဉ်ကာလအတွင်းအစည်းအဝေး၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသည်အလှည့်စဉ်ကာလအတွင်းအစည်းအဝေး၊သို့မဟုတ်အရင်မလှည်။ (ဒါကြောင့်ပတ်ပတ်လည်လှည့်ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ရွေတော့ဘူး၊ကြည့်?) မိန်းကလေးများ:ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လျှင်အဆိုပါမိန်းကလေးငါ့ကိုကူညီနိုင်။ (အေသာသူငယ်သာလိုဖော်ရွေအစည်းအဝေး? မအငယ်တယောက်ကိုအသင်၏အလုပ်အတွက်တက္ကသိုလ်အရက်ဆိုင်မီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းအစည်းအဝေး?) ယောက်ျားလေးများ:သင့်ရဲ့အကြံဥာဏ်လည်းအသုံးဝင်! သင်မည်သို့ခံစားရကြောင်းအခြေအသင်ရင်ဆိုင်နေရ? နှင့် ဘယ်လိုလုပ်သင့်"ပစ္စည်းဆိုင်"ကို၎င်း၏အစိတ်? ဒါဟာအလွန်အရေးပါသည်ကျွန်တော့်အတွက်၊ငါ့ကိုကူညီပေးပါဘယ်မှာငါပြီးသားတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်၏ မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူပေါ် ၊နှင့်ယခုငါအံ့သြပါ၏လျှင်ကိုယ့်အဘို့အမေးနိုငျသူမ၏ဖုန္းနံပါတ္။ ငါတို့သည်လည်းတွေ့ဆုံရန်ရှိသည်ကိုအများမီနှင့်အပြီး၊ဒါကြောင့်အပေါ်၊ဒါပေမယ့်သူမကတည်ငြိမ်ပြီးမကြာခဏ။ ကျွန်မတွေးမိရင်ရနိုင်သည်သူမ၏အရေအတွက်၊သင်ထင်သလဲ?"ငါသည်အထွက်ရောက်ရှိဖို့မိန်းကလေးငယ်များအပေါ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အခါသူမကလိုလားအတူနေ့စွဲအပေါ်သွား၊ငါ့ကိုငါဘယ်လိုကိုင်တွယ်သင့်သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့သည်သင်တို့အဖို့ဘာလုပ်သင့်နေ့စွဲအပေါ်သွားတာပါမိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့အပေါ်သောကြာနေ့နှင့်အတူအဘယ်သူကိုကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ရုပ်ရှင်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ။ သင်သည်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလည်းဆုံးဖြတ်ရန်အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်၊ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာ၏စကား၊တစ်ခုခုကိုရပ်တန့်ရန်။ ငါတကယ်ဖို့လိုအပ်ဘာမှမဆောင်ခဲ့?"ဟေး၊ငါအကုန်ရက်အနည်းငယ်မှာကျွန်မရဲ့ကျောင်းရက်အနည်းငယ်အကြာ။ ကျွန်တော်တို့တိုတိုတုတ်တုတ်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြောင်းအဆိုပါစစ်ပွဲများ၊ဒါပေမယ့်လည်း၊ဒါပေမဲ့သူနေဆဲသိသူခဲ့ပါတယ်၊အခုကျနော်တို့မှန်မှန်ရေးကနေပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်၊ငါသည်လည်းကြောင်းလေ့လာသင်ယူကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ကစားရန်အတွက်စန္ဒယား။ ကျွန်မပတ်ပတ်လည်လှည့်ညင်ညင်သာသာ သူနှင့်အတူကြောင့်၊သူသည်အလွန်ကောင်းသောလှပါတယ်! ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဝံ့မသူ့ကိုမေးသောကြောင့်၊ငါသည်မကြောက်ပါလိမ့်မယ်မျှမပြော။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ကျနော်တို့သိတဲ့"ဟုတ်ကဲ့"ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်စကားလက်ဆုံနှင့်အတူငါ့ကိုနှေးကွေးသွားကြောင်းရှိသည်သောအကြံပြုချက်များကို? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! တဦးတယောက်တည်းကပိုအမးခြန္းယောက်ျားတွေများအတွက်:ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်သင်ကြိုက်ကြပါဘူးသောအခါမိန်းကလေးစေပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း? ငါသတိထားမိနှင့်အတူမိန်းကလေးအကြှနျုပျကိုအောင်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့နှင့်အတူ၊ငါ့ကိုအဘို့အရှာဖွေနေ၊တွန်းကွာ၊ဘယ်လောက်သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအပေါ်ငါ့လက်ကို ငါ့ဆံပင်၊သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအခါငါကိုင်သင်တင်းကျပ်စွာ။ ငါနေဆဲဝံ့ပြန်လည်သင့်နှင့်အတူ၊သင်သည်မည်သည့်အကြံပေးချက်များအပေါ်အောင်ဘယ်လိုလွယ်ကူများအတွက်ဗို့အားမေးခွန်းများမေးရန်မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်အလွန်ကောင်းစွာနှင့်အတူမိန်းကလေးမှငါ၏အအတန်း။ ငါတို့သည်လည်းဖြည့်ဆည်းသည္။ ကျနော်တို့နမ်းပွေ့အသီးအသီးအခြား၊ကျွန်တော်တို့လည်းရေးဖို့နေ့တိုင်း၊သူမမကြာခဏပြောပြဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ကြောင်းသူမနှင့်သူမချစ်တော်မူ၏။"ငါသူမ၏ကိုချစ်၊ပင်အပေါင်းတို့နှင့်အတူအကြှနျုပျနှလုံး၊ဒါပေမယ့်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်၊အဘယ်သူမျှမဆက်ဆံရေးဟာအားမေးရန်။။။ငါ့ကိုကူညီပေးပါ မဂၤလာပါ၊ကျွန်တော်တစ်ဦးအားလပ်ရက်မှာမိန်းကလေးရေးသားခဲ့သည်ငါ့ကိုအလွန်မကြာခဏမေးချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲဒီကုမၸဏီလို၊ပထမ၊ဝံ့ဖို့၊နှင့်ဒုတိယအ၊ငါလဲမသိဘူးမေးရန်မေးခွန်းများနှင့်ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမမေးကြဘူးအဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလပ်ရက်အပေါ်၊ဟေးရေးနေတာကိုအချိန်နှင့်အတူမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်မအလွန်အရှက်လိုငါ့ရှက်ကြောက်ခုကိုကျော်လွှားဖို့၊သူ့ကိုမေးလျှင်ရှိ၏စိတ်ကူးယဉ်ဖို့အချိန်ကိုယူ။၊ဥပမာအားဖြင့်၊ သွားဖို့အမြို့(ရှိပါကအတွေးအကြောင်းသင်အလွယ်တကူရေး)ယခုငါဘယ်လိုသိတိကျမှန်ကန်ပါမေးခွန်းတွေကြောင့်ကျွန်မလည်းဆင်းရဲတရားစီရင်လျှင်၊သူသည်အစဉ်အဆက်ကယ့်ကိုအလို၊ကိုယ့်လျှင်မေးရန်ရှိသည်နိုင်ပြီစိတ်ကူးယဉ်အချိန်သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အတွက်မြို့လယ်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါရှိသည်မိန်းကလေးငါဖူးမြင်ခင်၊ကိုယ့် နှင့် အက္ပ္ျဖစ္သည္။ ယခုမူကားငါမေးတကယ့်မေးခွန်းရဲ့အဆုံးမှာအစည်းအဝေး၊အရာသူမကလည်းလုပ်ချင်၊ဒါပေမယ့်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှိသည်မယ်လို့ဘာမှမပို။ အစိုင်အခဲ။ အကွောငျးတစ်ပါတ်အကြာတွင်၊ငါသူမ၏မေးလျှင်သူမလိုရုပ်ရှင်သွားဖို့အကြောင်းငါနှင့်အတူတနင်္ဂနွေ၊ဒါပေမယ့်မဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိခဲ့တနင်္ဂနွေရှိပါတယ်။ အခုကျွန်မပိုပြီးမေးခွန်းတွေက၊အရာနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနီးပါးရက်သတ္တပတ်ကွာ။ ငါနှင့်အတူရုပ်ရှင်။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့မေး ? သည်မဟုတ်ကြောင့်အနှောက်အယှက်လျှင်အစဉ်မပြတ်ငါဖို့အချိန်ရှိသည်မေးခွန်းတွေမေးလား။ အဘယ်သူသည်တစ်ဦးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းမရှိသလောက်ငါ့ဇုန္နိုင်နှင့်အတူရုပ်ရှင်သွားခင္ဗ်ာ။ ဒါပေမယ့်သင့်ငါကိုမေး? ဘာအကြောင်း၊ငါကိုမေး? ကျွန်တော်သွားပြီးနောက်အစည်းအဝေးတစ်ခုပဲကြားပြီး၊သို့မဟုတ်သူမရည်းစားသူအရင္းေလး? လိုအပ်အချို့အကူအညီ:ကျွန်တော်အမြဲချိန်းတွေ့တဲ့မိန်းကလေးနှင့်ကျွန်မအထင်ခင်ဗျားအတွက်နှင့်ကျွန်တော်သူမ၏၊သူမကသိတယ်၊ဒါကြောင့်လည်းသောကြောင့်၊မယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ပဲနီးကပ်လာလာ၊ဒါပဲကိုင်ငါ့လက်သို့မဟုတ်နမ်းပါ၊ငါသိသင်ဘာလုပ်သင့်၊ဒါပေမယ့်မယုံကြည်၊ကိုယ်ရယ်သိပ်မကြောက်၊ငါမသိေသးဘူး၊ငါမူကားမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်၊ကိုယ်ဟုတ်တယ်၊ငါသည်အဘယ်သို့ဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ကြဘူး? မင်္ဂလာပါယနေ့ငါရှိသည်သောသူမိန်းကလေးတစ်ဦးသူ့ကိုမေးလျှင်သူလှည့်ဖို့ပတ်ပတ်လည်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်အကြောင်း၊ငါတို့သည်မြတ်စွာဘုရား ကျနော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်။ ငါသတိထားဖြစ်ရမည်။ အဘယျသို့အတိအကျသူမပြောနေ? ကျွန်တော်မေးတာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကိုတွေ့ချင်၊သူမသည်ဟုတ်ကဲ့ဟု၊ဒါပေမယ့်မအမြဲကြိုးစားသောအခါ အက္ပ္ကိုမေးလျှင်၊နက်ဖြန်ကေျပာကံမကောင်းစွာမရှိ၊ယခုတွင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုသင့်? ငါသူ့ကိုပြောပြပါ? မယုံကြည်ကြဘူးငါ့ကိုအကြီး၊ဒါပေမယ့် ဆက်သွယ်မှုမဲ့အမှတ်တာ့ပါဘူး။ အဘယျသို့အားလုံးဒီဆိုလိုတာလဲ? မင်္ဂလာပါ၊ငါမလိုအပ်တစ်ရုံတွင်မေတ္တာနှင့်မိန်းကလေးရေးသားခဲ့သည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုစဉ်းစားခဲ့သည်။ (ငါတကယ္။) သူမလည်းမြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုအဖို့အလွန်လျှင်မြန်စွာ၊နှင့်အရေးအနည်းငယ်၊အခုလည်းညင်ညင်သာသာ။ သူမလည်းရေးသားခဲ့သည်။အဲဒါဟာအလွန်ပူနွေးသောအဖြစ်ငါ့နှလုံးကျွန်မအံ့အားဖြင့်အနတ္တ။ သင့်လျော်သောအသက်အရွယ်အလွန်ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်လည်းသက်သာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့အတွက်အိမ်နီးနားချင်း။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရင်ကောင်းမေးသည်မိမိအရေအတွက်၊ပြီးတော့အဘယျသို့? ကျွန်မအထင်ကျွန်မကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးတော့အရင်ရေးပြီးနောက်ကြောင်းရက်စွဲတစ်ခုတွေ့၎င်း၏အကောင်းရက်စွဲအတွေးရင်တကယ်ရေးဖို့သင့်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြိုတင်မဲအတွက်နှင့်အကောင်းဆုံးဆန္ဒကို။
ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်တစ်လျောက်ပတ်သောဘဝလက်တွဲဖော်၊အရာဖန်တီးပေးလိမ့်မည်ညွတ်သောဆက်ဆံရေး။ ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနှင့်အတူမိဿ-မွတ္ပံုတင္ပါ။ ဒါကြောင့်သာယူ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အမျိုးသမီးများ-အကြီးဆုံးဒေတာဘေ့စ၏စံမ်ား။ အမျိုးသားများထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့၌ဒိန်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများဖြစ်ကြ၏ရှာဖွေရေးအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ မလွန်၏။။။။။ တဦးတည်း၏အမျိုးသားများအတွက်အားလုံးသင့်ရဲ့ကောင်လေး။ သူရှာဖွေနေသည်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်။ သင်ရုံရန်လိုအပ်ပါတယ်ခြေလှမ်းယူ။ သိကောင်းစရာ:သင်ပြီးနောက်မှတ်ပုံတင်၊ပါပုံစံကိုဖြည့်ပေးပါနှင့်တင်၏စုံတွဲတစ်တွဲသင်၏အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများ။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊ကကောင်းတစ်ဦးပြီးစီးခဲ့လျှောက်လွှာပုံစံ၊အနှေးနဲ့အမြန်အမျိုးသမီးကိုတွေ့သူမ၏ယောက်ျား၏အိပ်မက်။ ကောင်းစွာအရေးယူဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ရလဒ်ကိုတွေ့မြင်။ ဒိန်းချိန်းတွေ့နိုင်နေတဲ့လူကိုခရီးဦးကြိုပြုပြီးနောက်အနှစ်သုံးဆယ်။ လုံးအတွက်အတွက်၊သင်နေတဲ့လူကိုခရီးဦးကြိုပြုပြီးနောက်လေးဆယ်ပြီးနောက်ခြောက်ဆယ်နှစ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အားလုံးအသက်အရွယ်။ တစ်ဦးသံသယမပါဘဲ၊ချိန်းတွေ့ဒိန်းချိန်းတွေ့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိသောမိန်းမ။
S Memphis: hər şey etmək Olar, yol artıq saytın tanışlıq
မိန်းကလေးများအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန် ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုအမျိုးသမီး ချက်တင်ကစားတဲ့ကနေအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများအခမဲ့အွန်လိုင်း ချိန်းတွေ့ဘို့အဆက်ဆံရေး ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း တက်တွေ့ဆုံရန်အဘို့တစ်-အချိန် ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများအခမဲ့ အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈